कमब्याकले रहर भरियो, मन भरिएन – An Online Entertainment News Portal
HomeGalleryCelebrityकमब्याकले रहर भरियो, मन भरिएन
December 31, 2018 Tulasa Karki Celebrity, Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- कसको कमब्याक कती सफल, कती असफल ? कमब्याक गर्न त्यती सहज छैन । दर्शकले विर्सिसकेको अवस्थामा फेरि आएर सोही अनुसारको स्थान बनाउन सजिलो पक्कै छैन । नेपाली फिल्ममा कमब्याकको प्रथा पुरानो हो । कलाकारहरु आफू हिट भैरहँदा काम गर्छन् ।
हिट हुन छाडेपछि उनीहरु फिल्म क्षेत्र छाडेर अन्तै वा विदेशतिर पुग्छन् । तर, पछि फेरि नाम हराउँदै गएपछि सोही नामको खोजी गर्दै फिल्ममा आइपुग्छन् । अभिनेता रमेश उप्रेती हिट भैरहँदा अमेरिकातिर लागे । नेपाली फिल्ममा हिट भैरहेको समयमा अमेरिका हानिएका रमेश लामो समयपछि नेपाल आए ।
नेपाल आएर उनले सिनेमा ब्रासलेट खेले । यो सिनेमा चलेन । पछि उनले आफै सिनेमा ऐश्वर्य बनाए । यो सिनेमा औषत चलेपनि उनको चर्चा भयो । रमेश उप्रेती अहिले पुरानो नाम फर्काउने दौडमा लागेका छन्, तर उनी पूर्ण सफल भैसकेका छैनन् । अभिनेता निखिल उप्रेती पनि ५ बर्ष मुम्बइमा बसेर भैरव सिनेमा आफैले निर्देशन गरेर फिल्ममा कमब्याक भएका हुन् ।
यसपछि त उनले लगालग काम पाए । तर, उनी पनि पहिलेको जस्तो क्रेज फर्काउने असमर्थ छन् । एउटै खालको सिनेमा खेलेकाले पनि उनलाई दर्शकले पत्याउन सकेका छैनन् । दर्शकको टेष्ट फरक भैसकेको समयमा अभिनेता विराज भट्टले पनि जय परशुराम फिल्मबाट कमब्याक गर्न खोजेका हुन् ।
तर, सिनेमा चलेन । सिनेमा नचलेपछि भोजपुरी सिनेमामा गएर स्टार भएका विराज अहिले रन्थनिएका छन् । उनी अब आफै सिनेमा साङ्लो बनाउने तयारीमा छन् । अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर पनि ९ बर्ष अमेरिका बसेर नेपाल आइन् । नेपाल आएर उनले आफै फागू सिनेमा पनि बनाइन् । केही फिल्ममा उनी चरित्र अभिनेत्री भएर काम गरिन् ।
दर्शकले करिश्माको सुन्दरताको चर्चा त गरे, तर उनलाई हेर्न नै भनेर हलमा गएनन् । करिश्माको कमब्याक पनि सफल हुन सकेन । अभिनेत्री गौरी मल्ल पनि अमेरिकाबाट नेपाल आइन् । नेपालमा आएर राम्रैसँग जम्ने उनको सोच थियो । तर, उनलाई सिनेमामा भूमिकाका लागि खासै अफर आएको छैन ।
कमब्याककै कुरा गर्दा अहिले अभिनेत्री निरुता सिंह पनि नेपाली फिल्ममा आएकी छिन् । ८ बर्ष लामो मुम्बइ बसाइपछि उनले फिल्म नाई नभन्नु ल ५ बाट कमब्याक भएकी हुन् । तर, उनी मुख्य भूमिकामा भने दाल भात तरकारीमा काम गर्दैछिन् । निरुतालाई दर्शकले रुचाएको खण्डमा उनको कमब्याक सार्थक हुनेछ ।
अभिनेता सरोज खनाल अहिलेका व्यस्त चरित्र अभिनेतामा पर्छन् । सरोजको हातमा सिनेमाको त कुनै अभाव छैन । उनले हातमा आएका सबै सिनेमामा काम गरिरहेका छन् । पुरानो क्रेज त उनको फर्किएको छैन, तर उनलाई कामको अभाव भने भएको छैन । हाँस्य कलाकार राजाराम पौडेल अहिलेका सर्वाधिक व्यस्त कलाकार हुन् ।
उनको हातमा सिनेमाको अभाव त परको कुरा, सेड्यूल मिलाएर काम गर्दा पनि नभ्याउने अवस्था छ । राजारामको कमेडीलाई दर्शकले आज पनि उस्तै रुचाएका छन् । कलाकारहरु सिनेमामा आउँछन्, जान्छन् । तर कमैले मात्र आफूलाई कमब्याक गराउने हिम्मत गर्छन् । कमब्याकमा सबैलाई दर्शकले उस्तै माया गर्छन् भन्ने पनि हुँदैन । तर, जतिले माया पाएका छन्, ती भाग्यमानी हुन् ।
नायिका करिश्मा मानन्धर दशैं कसरी मनाउदै छिन, उनलाई दशैंको यस्तो सर्प्राइज गिफ्ट कस्ले दियो ? ( भिडियो )
September 30, 2017 Keshab Khadka Entertainment, Interview, Videos 0
यसरी मनाउदै छिन नायिका करिश्मा मानन्धरले दसैं